Monday May 04, 2020 - 19:36:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya diyaarad rakaab ah oo maanta gelinkii dambe lagusoo riday degmada Bardaale ee gobolka Baay.
Ilo wareedyo ku sugan gobollada Bay iyo Bakool ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyay in ciidamada Xabashida Itoobiya ee saldhigga ku leh degmada Bardaale ay dhulka soo dhigeen diyaarad xamuul ah oo ka kacday garoonka Baydhabo kunasii jeeday Bardaale.
illaa 6 qof oo isugu jiray rakaabkii diyaaradda iyo shaqaale ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen diyaaradda oo gabi ahaanteedba burburtay, diyaaradda lasoo riday ayaa ukiraysneed shirkadda African Express oo kamid ah shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya.
Goob joogayaal waxay sheegeen in ka hor intii aysan diyaaraddu kusoo dhowaan Bardaale ay ciidamo Itoobiyaan ah oo wata gaadiidka Uuraallada loo yaqaan ay ka dhaqaaqeen saldhigga ay ku leeyihiin Bardaale daqiiqado kadibna waxaa lamaqlay qarax weyn oo ka dhashay qoriga Zuugga oo ay la eegteen diyaaradda.
Wararka ayaa intaas ku daraya in markii diyaaraddu ay burburtay kadib ay ciidamada Itoobiya hawada ka saareen isgaarsiinta Bardaale balse caawa maqribkii ayay dib usoo fasaxeen isgaarsiinta.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin saraakiisha ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Baay oo ku aaddan sababta ay diyaaradda rakaab ah usoo rideen, dowladda Itoobiya ayaa gummaad ku haysa shacabka soomaaliyeed ee ku sugan deegaannada ay gummeysato.